Ogaden News Agency (ONA) – Xafiiska JWXO ee Gobalka FAAFAN oo kulan layeeshay Dhegooda UCSO.
Xafiiska JWXO ee Gobalka FAAFAN oo kulan layeeshay Dhegooda UCSO.
Posted by Cabdalla Cabdalla	/ August 8, 2019
Waxaa si guul ah kudhamaaday kulan balaadhan oo Gudiga Xafiiska JWXO ee Gobolka Faafan ay uqabteen Ururka Culimada Soomaalida Ogadenia ee magaalada Jigjiga.
Kulankan oo ahaa mid balaadhan ayaa lagaga wada hadlayay sidii culimadu ay uga qayb qaadan lahaayeen qabashada sanadguuradii 35aad ee kasoo wareegtay aas’aaskii JWXO oo magaalada Jigjiga lagu qaban doono bishan aan kujiro hadii Alle Idmo.
Gudoomiyaha Xafiiska JWXO ee Gobolka Faafan Marwo Yusra Axmed Ibraahim ayaa xubnaha usoo jeedisay khudbad mug leh oo ay kaga hadashay sidii hab midaysan loogu qaban lahaa sanadguurada JWXO oo mudo dheer kadib si xor ah loogu qaban doono magaalada Jigjiga.
Marwo Yusra ayaa si qoto dheer uga hadashay doorka Culimada Soomaalida Ogadenia iyo kaalintooda halgan, waxayna xustay in ay rajaynayso in ay doorkooda qaadan doonaan.
Sidoo kale waxaa khudbad muhiim ah soo jeediyay Gudoomiyaha Ururka Culimada faraciisa Jigjiga halgame Sh Maxamed Axmed Cumar, wuxuuna gudoomiyuhu sheegay in ay culimadu kaalin mug leh kaqaadan doonaan howlaha halgan ee Gobolka Faafan kasocda.
Guntii iyo gunaanadkii waxaa si habsimi ah kudhamaaday kulankii dhex maray Gudiga Xafiiska JWXO ee Gobolka Faafan iyo Ururka UCSO fariciisa magaalada Jigjiga.